China FOTON H7 ifektri abakhiqizi | Izithombe
Ngenxa yokuguquguquka okuphezulu ngokuya kokucushwa nokuhlukahluka komthamo, kungenzelwa ukuhamba kwezindawo zokuhamba nezokuthutha. Izinto zokwakha, i-powertrain, ukucubungula nokukhiqiza kuhlelelwe impilo ende.
Ubukhulu Sekukonke 7300 * 2230 * 3030 (nge-A / C)
Nciphisa Isisindo 6T
Ukuhlala Umthamo 21 + 1/23 + 1/25 + 1/28 + 1
I-Foton H7 entsha ihlanganisa ukusebenza okuphezulu nenduduzo, nekhwalithi yomsindo ngokuphepha okuhle kakhulu. Kugxilwe kakhulu hhayi kuphela ekwakhiweni kwayo okune-aerodynamic nezimpawu zokushayela ezivelele, kepha ikakhulukazi ekusebenziseni kwayo uphethiloli osebenzayo nezindleko eziphansi zomjikelezo wempilo.
I-Powertrain enhle kakhulu ngamasu wamandla ahlanganisiwe athuthukile namandla we-R & D avuthiwe, ibhasi lochungechunge lwe-Foton 7M lunohlelo oluhle kakhulu lwe-powertrain, okubandakanya ukusebenza kwezimoto okwandisiwe nokusetshenziswa okuphansi.
Ukusebenza kokuqala okuvelele, ikakhulukazi emazingeni okushisa we-ultralow, -40ºC;
Ukudlidliza okuphansi, umsindo ophansi wokushayela ngokunethezeka, u-7% uphansi kuneminye imikhiqizo encintisanayo;
Isisindo sifinyelela ku-340kg kuphela, 15% -60% ilula kuneminye imikhiqizo encintisanayo;
Umphumela welitha ngalinye lisondela ku-33.2kW / L, 10-35% ngaphezulu kuneminye imikhiqizo encintisanayo;
I-torque enkulu ifinyelela ku-600NM, yenziwe kahle ekukhuphukeni kwethambeka.
Ukugcwaliswa kukawoyela impilo yonke kuyatholakala
FS oluvala amasondo
Izindlu ze-axle ezinokucubungula okukhethekile, ukuqina okuhle namandla amakhulu;
Idrayivu yokwehliswa kokugcina enesakhiwo esihlanganisiwe, igiya elinamandla amakhulu elinesimo esingcono sokuthambisa;
Umsindo ophansi nokusebenza kahle kokudlulisa, ukuqinisekisa ukuthi imoto ithokomele kanye nomnotho.
Ngokuya ngamasu avuthiwe we-Foton truck chassis, ibhasi le-Foton lenze intuthuko ye-chassis yokufanisa kahle isakhiwo sebhasi:
Ukuthembeka kukhuphuke ngo-30% Wensening chassis frame, i-steadier Safety coefficient ikhuthazwa kakhulu Thola ukwamukelwa okubanzi ezimakethe zomhlaba.
Ibhuleki langaphambili le-disc & ukubopha kwesigubhu kwangemuva
Ukusebenza kahle kokushabalalisa ukushisa, ukwenza ngcono ukuzinza nokusebenza kahle kwamabhuleki kohlelo lokubhaka amabhuleki Isakhiwo esilula kanye nokwehla okuhle komnotho okushisayo nokubuyiselwa kwe-braking esitebeleni ngokuphepha okuphezulu, ukusetshenziswa kwamandla aphansi, impilo yenkonzo ende
Isistimu yesixwayiso sokuhamba ngomzila (LDWS) exwayisa umshayeli lapho imoto iqala ukuhamba ngomzila ongahlosile
I-Foton ingumnikazi wezintambo zikazwelonke ezisezingeni elijwayelekile lokufakwa kwedijithali, isivinini sokuhlolwa kwejubane, umbhede wokuhlola uhlangothi, umthwalo we-eksisi, umbhede wokuhlola we-ABS, uhlelo lokutholwa kokuhlolwa kwamabhuleki nokunye, Ukuqinisekisa isitifiketi nokugunyazwa okuvela e-German TUV Rheinland nase-CNAS laboratory kazwelonke